TENISY AMBONY LATABATRA – “OPEN DE TANA” :: Narodan’i Nicky sy Rojo ny tompon’ny amboara farany • AoRaha
TENISY AMBONY LATABATRA – “OPEN DE TANA” Narodan’i Nicky sy Rojo ny tompon’ny amboara farany
Nahazo tompondaka vaovao ny fifaninanana tenisy ambony latabatra, “Open d’Antananarivo” sokajy tanora, izay notanterahina teny amin’ny kianja mitafon’ny ANS Ampefiloha. Norombahin’i Nicky avy ao amin’ny klioban’ny Aro teny an-tanan’i Anicet avy ao amin’ny Gecko Sport Moramanga, ny anaram-boninahitra teo amin’ny sokajy zazalahy.
Nandresy tamin’ny seta telo (3 noho 0) ity tompondaka ity tamin’izany ary izy ireo ihany no niatrika ny lalao famaranana tamin’ny andiany teo aloha. Toy izany ihany koa, resin’i Rojo avy any Moramanga, tamin’ny seta telo (3 noho 0) ihany koa i Harena avy ao amin’ny klioban’ny Asa Antsahamanitra, tompondakan’ny dingana farany. Hitohy amin’ny dingana fahatelo, amin’ny volana febroary ny adin’izy ireo, izay hahafantarana ny atleta hiatrika ny fiofanana any Frantsa. Izy efatra mianadahy, Nicky sy Anicet miampy an’i Rojo sy Harena, no hiady izany.
Teo amin’ny sokajy lehilahy mifangaro indray dia resin’i Setra Rakotoarisoa (Acacias) tamin’ny seta efatra (3 – 1) i Eric Randrianantoandro na i Tagg (Jovena). Voatanan’i Rondro Rajaonah kosa ny anaram-boninahitra teo amin’ny sokajy vehivavy, rehefa avy nandresy an’i Santatra (Gecko Sport Moramanga), tamin’ny seta efatra (3 – 1) izy.